Otutu Akwukwo Nsochi Akwukwo Nso
Anyị anaghị eme ihe site na 1 / 2 ebe a na CheekyPunter.com nke kọwara ihe kpatara m ji mepụta ntuziaka nke kachasị webs dị mma bụ ịgba chaa chaa. Ezubere akwụkwọ ntuziaka maka isi ihe a bụ n'ezie otu n'ime ị ga - achọta akwụkwọ ntinye akwụkwọ nke dabara na nke a bara uru ngwa ngwa..
Nkwa m: Enwere m onwe m mpako na nkwụsi ike na ezi obi na ọrụ m naanị na CheekyPunter.com ma kwe gị nkwa na n’ozi a aga m ejikọ ịntanetị na ntanetị weebụ anyị doro anya na anyị kwenyere na ọ kachasị baa uru..
Egwuru oke: 1-10
onye na-anabataghi ya, n’ihu Victor Chandler, so n'ọtụtụ ndị jikọtara ndị na-edenye akwụkwọ a bụ nke ekwuru na Gibraltar. Nke a bụ ihe mere ha jiri dị oke elu:
a £ 25 £ nke a bụ n'ezie enweghị-ọnụ ị sonyere nke ewepụtara site n'ịnọgide na-akwụ £ 25 na ụdị ihe ahụ nwere ike 2.0 ma ọ bụ karịa karie mgbe wager nke mbụ.
Oge ọ bụla, ị ga - emepe weebụ ị na - ekpughe bọọlụ baseball Europe - n'adabereghị nke ọma site n'iji ndị ọkachamara n'ọdịiche.
ohere kachasị bara uru na-ekwe nkwa na UK na ịnyịnya niile na-adịghị mma ma ọ bụrụ na SP buru ibu karịa ọnụahịa gị ka akwụ ụgwọ kpamkpam.
Ego a bụ azụ ahịa azụ ọpụrụiche kachasị mma (ee ka mma karịa Paddy Power) ga-ejide ebe ọ bụla weebụ - ekwenyeghị anyị? Ga-aka mma ịlele ha mgbe niile.
Ntughari akara - Betvictor ị ga - achọ ịbụ onye ọzọ na - ede akwụkwọ nke a n'ezie na intaneti ebe a na - akpọ Bet365) O yikarịrị ka ị ga-enye ọkwa + A. Nke a bụ nke kachasị elu ma site ugbu a gaa ntụkwasị obi, ịkwụwa aka ọtọ ma ọ bụ nsogbu ị jigharịrị nke a na - egosi na ha na - enye gị ezigbo mmadụ.
- Soro njikọ a iji gaa Betvictor, jidere onwe gị £ 25 na-akwụghị ụgwọ ma nweekwa akaụntụ efu ugbu a.
nọmba 2 PaddyPower.com
paddy powerPaddy Power nwere ikike enyere ya n ’aka nke Gamanị nke Isle nke mmadụ. Enweela ọtụtụ ihe ha na-enye ndị na-enye onyinye:
ego kwa ụbọchị na azụghachi ọpụrụiche na nnukwu onyinye maka ihe egwuregwu dị egwu - chee derby na nke a bụ nnukwu nnukwu, asọmpi tenis dị egwu na Wimbledon ebe a.
a £ 20 nzọ nke na-enweghị ahịa ahịa na-ekesa site na-etinye nnọọ Wager na bụ nke mbụ na ha niile ka gị uru nke £ 5 na ihe ọ bụla nwere ike nke 2.0 ma ọ bụ nwere ike karịa.
Ngagharị nke dị ndụ nke a bụụrụ ndị ahịa niile uru nwere akaụntụ ya.
nkwalite ohere ohere ana --eme ka okpukpu abụọ ma ọ bụ atọ na - enye gị nloghachi dị mma karịa ebe ọ bụla n'ịntanetị.
Ego- enyela Paddy ikike ime nyocha m nyocha nke a bụ ngalaba zuru oke. Otu uru ha bara na mbụ nwere ike ịbụ uru dị na nke a ga-abụ onyinye a na-aga n'ihu. Enwere ohere dị ukwuu iji rite uru mgbe ego a na-anabatakarị.
- Gaa Leta ike Paddy site na ịkwanye njikọ a nke bụ weebụsaịtị mepee akaụntụ ahịa na-ekwu ma kụọ ego £ 20 nke na-adịghị akwụ ụgwọ!
william ugwuWilliam Hill na-abụ onye ọzọ na-ede akwụkwọ nke kpebiri ịbufe mba ofesi ma nwee ikike Gibraltar ugbu a nke a na-ama jijiji.. Ha na-anabata bọọlụ ọhụụ site na ịgba bọl £ 10 wetara £ 20 wager na-enweghị ego na-enye ezigbo oge ezigbo oge nke a bụ ntanetị n'ịntanetị. Ha adịghị mma na mkpọsa ma ọ bụ nkwekọrịta nke nwere ike ị nweta ego na-enye nsogbu nke nwere ike ịnweta ego) yabụ enyere m ha naanị ọkwa Rụọ n'ozuzu ha.
Definitely ga - achọta ihe ndị ọzọ gbasara ezigbo ihe kpatara William Hill ji abụkarị otu n'ime ihe kachasị mma site na ịga na akwụkwọ nyocha William Hill.
betfredBetfred nwere asambodo na Gibraltar yana bọọlụ abụọ nke a bụ nnukwu ihe n'ezie. Nke mbụ bụ mgbaru ọsọ dị iche iche na - enye ndị otu egwuregwu abụọ dị n'otu akara maka ị nweta mkpokọta. Nkọwapụta ọzọ bụ afọ ojuju nke a bụ n'ezie akụkụ abụọ okpu atụmatụ nke elu igwe nke okpukpu abụọ ma ọ bụ tụọ gị ọrụ na mbụ ihe mgbaru ọsọ ebumnuche mgbe ha mere akara abụọ ma ọ bụ atọ na egwuregwu ịntanetị nke a bụ n'ezie n'ịntanetị. An a na-enweta ha niile ọkwa maka na egwuregwu ha kachasị nke a bụ nhọrọ nhọrọ nchekwa n'obere ebe ị na-ere abụghị kpọmkwem ihe ọ kwesịrị ịdị. Ihe mgbakwunye £ 30 nke na-agaghị akwụ ụgwọ maka ndị ahịa ọhụụ na mgbakwunye, naanị ị ga-egwu £ 10 iji zọọ ya.
Nke a bụ mkpokọta ọnụ ma nweta nzọ dị £ 30 adịghị ọnụ ahịa a na-enye ndị na-eme egwuregwu ọhụụ na-achọpụta nyocha anyị nke Betfred iji chọta ahịa na mgbasa ozi..
a na-enyochakarị coralCoral mgbe ị na-elele na UK na-akụda maka ịghara ịga mba ofe gaa ebe nsọ maka ụtụ isi iji rụọ ọrụ ha na nke a bụ ntanetị dabere na ha na-etinye ego ụgwọ dị ka ụra nke anyị. A na-anabata ndị ahịa ọhụụ site na nzọ nke £ 20 na-abụ freetriggered site £ 5 nzọ) ma anyị enyela ha niile ọkwa. Enweghị nsogbu ọ bụla na nke a bụ ezigbo coral acha uhie uhie mana oge a ka bụ n'ezie enweghị ezigbo ihe kpatara ị ga - eji sonyere ha. Ha na - eme ndab ma na enwere ike ịbawanye na agbanyeghị ndị a na - abụkarị obere ma dịkwa anya n'etiti 6 na ibe weebụ anyị ndị kachasị elu dabara adaba.
Nyochaa nyocha anyị na nke a bụ coral na-acha ọbara ọbara maka ozi gbasara nke ọma ihe onye na - ede akwụkwọ ga - enye.
Ladbrokes.com - enwere nzọ £ 50 nke a bụ n'ezie nye ndị na - azụ ahịa nke bụ ihe nchebe ọhụrụ na ọtụtụ ntụrụndụ dị ezigbo mma. Mgbe ọ bụla ha na-agba ọsọ nkwado egwuregwu bọọlụ kwesịrị ka ha leba anya mana ọ dịka naanị ọtụtụ ndị ọzọ na-ahụ maka akwụkwọ na-edetu karịa enwere ndekọ mgbe niile, nke a bụ ọnụahịa n'ezie.. Nke a na-ahọrọ nwere aha a n'ezie dị ukwuu na-Otú ọ dị iji nye punters ọ bụla nnukwu ihe mere arapara ha okwu nke a bụ n'ezie nnọọ ogologo. Ruo mgbe ihe gbanwere, ha agaghị ebuli ndepụta m. Ladbrokes nyochaa ebe a.
888egwuregwu # 8
888Sport.com - gbanyụọ echiche dị na njigide gị na nke a bụ n'ezie na ndị ahịa. Kwesịrị isonyere n'ihe banyere ego ha n'agbanyeghị na ikekwe ị gaghị anọ ebe ahụ ogologo oge. Mgbagha zoro na-aga n'ihu na-abawanye uru dị oke ọnụ ga-etinye ọtụtụ akara dị mkpa. Gaa na nyocha nke ahụ bụ 888Gbanye nkọwa ndị ọzọ.
StanJames.com - nzọ £ 10 na-eweta Wager nke bụ £ 10 abụghị ndị ahịa na-anaghị akwụ ụgwọ. Saịtị siri ike enwere ọ bụghị naanị nkwekọrịta dị mma na-emeghe mmepe ọzọ maka ezigbo uru. Real gụgharia enwere ike ị nweta. Ọ dịghị mkpọsa maka ihe ndị na-egosipụta ndị na-egosi na ị nwere ike ị gaghị anọ ebe a ebe a maka nke ukwuu ma nke a bụ n'ezie ogologo. Nyochaa ha niile na - akpọ nkọwa gbasara ibe Stan James.
Totesport.com - £ 25 nke ga-akwụ ụgwọ abụghị ọnụ na-akwụ ụgwọ ọhụụ. Isi ihe kpatara nke a bụ naanị otu bụ ezigbo ihe sonyere bụ mgbe ịchọrọ itinye totepool akpanghi dị ka ozi ahụ 6, totejackpot ma obu toteplacepot. Nchedo ojoo nke ntụrụndụ ndị ọzọ na enweghị ego na-egosi na Totesport na-ejedebe ala kachasị weebụ niile bara uru nke na-agbagha.. Nweta njiri mara nke nwere ike zuru ezu na ịga na nyocha m nke Totesport .
Dị ka usoro ntụrụndụ ndị ịchọrọ ịchọrọ iji ya dị mkpa dịkwa mkpa nkwụnye ego. Ọtụtụ na-ewere ọtụtụ otuto a nwere ike ịkwụ ụgwọ na ọ bụ maa nkpa ma ọ bụrụ na ọ na-abịa ụdị PayPal dị ụfọdụ saịtị ndị ahụ na-enyere ya aka. Icheta na-emetụta ọrụ ndị ọzọ e-wallet.
Ga - enyocha saịtị akwụ ụgwọ kachasị mma nke ịgba chaa chaa na - agbanye njikọ weebụ na nke a bụbu gara aga. Mgbe ị lere anya na ilk, nke a bụ eziokwu otu ọ ga - achọta weebụsaịtị niile Ukash na - anabata ma site na ịpị azụlinks dị mkpa.
Enwetara m akụkụ nwere oke mmụọ nke metụtara ego ọ bụla ịchọrọ iji tinye ego iji nweta ego gị ka ị nwee ike họrọ saịtị nke dịịrị gị n'onwe gị dabere na usoro ahụ. Taa ị ga-ahụ ebe nrụọrụ weebụ ahụ site na ịpị njikọ 'ego' ozugbo ị tụlere menu nke dị elu site na isoro njikọ a iji soro na nhọrọ nkwụnye ego..
Bgbọ Egwuregwu efu & Bonuses
Anaghị m akwado otu ịhọrọ ụlọ naanị ego ole nke a bụ ego niile ị nwere ike ịchọta aka gị ozugbo ị sonyere na ị ga-enwe obi ụtọ ịnụ na m nwere mpaghara anyị nke mejupụtara nke a. ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe kachasị na nke gị.
Iji lee anya na mpaghara ndị na-adịghị akwụ ụgwọ ebe a na-emeghe ngwa ngwa pịa ya, mgbe ị nwetara n’ezie ijide n’aka na ị ga-elele anya n’aka nri ka ọ na-edepụta nha niile akwụghị ụgwọ maka nha gbasara ego a bụ n’ezie enweghị ego a na-enye..
MARA: N'agbanyeghị na ọ dị mma inweta ụfọdụ ego ego ka akaụntụ gị na-aga ihe kachasị mkpa bụ oge kwesịrị nke a n'ezie. Site na nke a mgbe ego niile azụ azụ ọpụrụiche na mma enye enye. You ga - achọpụta na BetVictor na Paddy nwere ebumnuche nke kachasị mma na - enweghị mgbagha abụọ dị mma ebe a ị ga - elele ha niile yabụ anyị na - adụ ọdụ ike. Mee nke ahụ mgbe ị na-elele akụkụ nyocha site na ịpị hyperlink nke a bụ n'ezie gara aga.
Zuru Oche Maka Mobile
Nwere ike iji websaịtị ọ bụla nke ịntanetị bụ ekwentị nke aka gị nke a bụ ekwentị dị ala mana nke ndị egwuregwu buru ibu etinyego ọtụtụ oge na ike ha n’inye igwe mkpanaka karịa ndị ọzọ..
Ngwa emerela: mgbe ahụ ka m tụlee chioma nke a bụ n'ezie nnukwu edepụtara ha niile bụ nke bara uru maka ihe ekwentị mgbe ị na-elele ngalaba mkpanaka - pịa pịa hyperlink ịga ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ m nabatara ngwa kachasị mma..
MARA: can nwere ike isonye na websaịtị ọ bụla site na ngwa ha nke a doro anya ma dịrị njikere ịnabata ego nke a bụ n'ezie ịnweta ndị folks ịdebanye aha ha site na iji kọmpụta ha ma ọ bụ kọmpụta laptop ha.. Websitesfọdụ weebụsaịtị nwere ụgwọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịbụ ihe ekwentị ị ga-enweta yana akaụntụ nnata orifice.
O gosipụtara na nke a bụ n'ezie nke ngwụcha nke ndu nke a bụ n'ezie ego ole ịchọrọ ịchọrọ na nke a na-ejikwa steeti ndị dị n'otu ị bi.. Mgbe ahụ ị ga - enwe ike iji weebụsaịtị webmaker ọ bụla ịchọrọ na ị nwetabeghị iwu gọọmentị etiti siri ike na - achịkwa ịgba chaa chaa n'ahịrị ma ọ bụrụ na ịnọ na isi Europe na mgbakwunye..
Agbanyeghị mgbe ahụ ọ dị mkpa ịtụle nke ịgaghị anabata gị ma ọ bụrụ na ị bi n'ime mba ndị nwere mmachi iwu iwu weebụ.. Eshia bụ ọmụmaatụ nke a n'ezie. Can nwere ike inyocha ọtụtụ iwu na usoro iwu obodo ọ bụla batara na mpaghara CheekyPunter.com.
Rịba ama: mgbakwunye ndị ọzọ dịgasị iche site na ego na-abụkarị ego, yabụ kpachara anya nyocha tupu ị sonye na zụrụ iji gbochie afọ ojuju.